पराजित व्यक्तिले मन्त्री बन्न पाउँदैनः सुवास नेम्वाङ – Metro Today Weekly
पराजित व्यक्तिले मन्त्री बन्न पाउँदैनः सुवास नेम्वाङ
प्रकाशित : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३७
– २००७ सालकै हाराहारीमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइनुपर्छ भनेर घोषणा भएको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनता र हामी सबै त्यसमा लागेका हौं । तर सफलता पाउन धेरै समय लाग्यो । त्यो सफलता प्राप्त गर्न २०६२÷६३ को आन्दोलन कुर्नु प¥यो । जतिबेला जनता बलियो भए, संविधानसभाको कुरा उठ्थ्यो । जति बेला जनता कमजोर हुनु पुग्थे, संविधानसभाको विषय ओझेलमा पथ्र्याे । आन्दोलनको उत्कर्षमा जनता यति सबल भए, आखिरमा संविधान सभाले मूर्तता पाउने दिन हाम्रो अगाडि आयो ।
संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक मुहुर्त जुर्यो । एक पटक भत्कि सकेता पनि दोस्रो निर्वाचन गरेर हामीले त्यो समावेशी संविधान सभाबाट संविधान बनाई छाड्यौँ । त्यो साँच्चिकै ऐतिहासिक पक्ष हो । मैले अध्यक्षको आसनबाट नेपाली जनतालाई असोज ३ गतेका दिन धन्यवाद भनेको छु । राजनीतिक दललाई निरन्तर अघि बढ्न सहयोग गर्ने नेपाली जनता धन्यवादका पात्र छन् । मैले भनेको थिएँ, राजनीतिक दलहरु संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर जुटेका थिए, एकमुख भएका थिए ।
– हामीले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीता सहितको ऐतिहासिक संविधान जारी गर्यौ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले जनताका लागि संविधान बनायो । पहिलो पटक शासक होइन, जनता नै स्रोत थिए । त्यस अर्थमा संविधान फरक ढङ्गले बन्यो । यसभन्दा माथि अर्काे शक्ति नै छैन । त्यस रुपमा यस संविधानको निर्माण भएको हो । वास्तवमा यो संविधान समझदारी र सहमतिको दस्तावेज हो । संविधानसभा यति धेरै समावेशी थियो कि राजनीतिक रुपमा सबै खालका शक्ति उपस्थित थिए ।
हामीले सहभागितामूलक ढङ्गले छलफल गरी दुईपटक जनताको बीचमा गएर सम्झौता र सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान बनायौँ । सबै राजनीतिक सम्झौता र सहमति गरेर हामीले यस्तो संविधान निर्माण गर्यौ अब जनताको मन जितेर संसदमा आउनुस्, संसद् मार्फत तपाईले चाहेको जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ भन्यौं । हामीले यति लचिलो संविधान बनायौँ ।
– अहिलेको संविधान सम्झौता र समझदारीको दस्तावेज हो । थुप्रै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति कायम गरी समावेशी संविधानसभाले यो संविधान निर्माण गरेको हो । यसमा धेरैको बलिदान र समझदारी छ । यसमा सबैको सबै कुरा पुगेको छैन । चित्त नबुझेका कतिपय कुरा मेरा पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले सम्झौता र समझदारी गर्यौ । त्यही भएर त संविधान बन्याे नत्र बन्न सम्भव नै थिएन । असन्तुष्टिको विषय अचम्मको कुरा होइन । छिमेकी मुलुककै कुरा गर्दा दक्षिणमा १० वर्षसम्म भारतको संविधान नै नमान्नेहरु थिए ।
उनीहरुलाई एक ठाउँमा आइपुग्न १० वर्ष लाग्यो । तर, खुशीको कुरा, हामीकहाँ तीन वर्ष नपुग्दै सबै राजनीतिक दल सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदको विश्वास र अविश्वास प्रकृयामा आउनुभयो । हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्दै त्यससम्बन्धी संविधान सशोधनलाई पनि हामीले ऐतिहासिक रुपमा सर्वसम्मतिले पारित गर्यौं ।
– यस विषयमा विवाद नै छैन । संविधान जारी भइरहँदा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, हामीले राम्रो उत्कृष्ट संविधान बनायौँ । यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छाै । तर जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था मात्र गर्छ, क्षमता दिँदैन । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्छ ।
– निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार गर्दै आएका छौं । पहिलेको निर्वाचनको कल्पना गरौँ र अहिलेको निर्वाचनको तुलना गरेर हेरौँ ।समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि हामीले संविधान र कानूनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौ । यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरी भएका भनेर प्रश्न उठेका छन् । चुनाव महङ्गो नहोस्, सुलभ होस्, सामान्य मानिसले पनि भाग लिन सक्ने खालको होस् भन्नेलाई ध्यानमा राखेर व्यापक परिवर्तन गर्दै आएका छौं ।
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तुलनात्मक रुपमा सुधार हुँदै आएको पनि छ । घरको छानादेखि आँगनसम्म ढाकिने तुल र व्यानर झुण्ड्याउने चलन थियो, छ्याप्छ्याप्ति रङ्गीन पोष्टर टाँस्ने चलन थियो, गाउँघरमा त तोरणका रुपमा पोष्टर टाँसेरै घर सिङ्गार्ने चलन थियो । तर अहिले कहीँ पनि रङ्गीन पोष्टर देखिन्न । त्यसमा रोक लगाइएको छ, सादा खालको पर्चा मात्र छापिन्छ । झण्डाको त पूरै प्रतिष्पर्धा हुन्थ्यो । सामान्य उम्मेदवारले झण्डै पनि बनाउन नसक्ने स्थिति थियो । त्यो पनि बन्द भएको छ, ठूला र्याली पनि बन्द हुदै आएको छ । कतिपय कुरालाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढनुपर्छ ।
– वास्तवमा नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षाका साथ २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुभएको हो । विश्वकै इतिहासमा उदाहरणका रुपमा एक पटक होइन, दुई दुई पटक जनता नै जुरुक्क उठेर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई संविधानसभाबाट हामीले समावेशी संविधान बनायौं । जनतालाई आफनो लागि संविधान बनाउने सौभाग्य जुर्यो ।
जनताभन्दा माथि अर्काे शक्ति नै छैन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनता, देश र हाम्रो लागि अन्तिम मौका थियो । हामीले त्यस मौकालाई सदुपयोग गर्यौं । अब हामीसँग अर्काे मौका र विकल्पै छैन । संविधानले सबै व्यवस्था गर्छ तर बुद्धि, विवेक र क्षमता दिँदैन । अब इमान्दारी र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । हामीमा अन्तर्निहित क्षमता हामीले देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबै परिवर्तनकारी शक्ति र सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्छ । तराई मधेशदेखि हिमालसम्म सबै जाति, भाषा, संस्कृति मान्ने जनता राष्ट्रहितका विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो ।
एमालेमा पुनः एकताको पहल २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३७
पत्रकार महासंघको अध्यक्ष अझै आचार्य २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३७
सञ्चारमा माओवादी एजेण्डा घुसाउन को सक्रिय ? २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३७
पत्रकार महासंघकी माओवादी केन्द्र ? खोप र राहत सहयोग समेत चलखेल २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३७
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, को थपिएलान् सात मन्त्री ? २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३७